Philips PQ206-01 Shaver | Buy online | SHOP.COM.MM
Philips PQ206-01 Shaver
Floating ခေါင်း ပါရှိခြင်း
Self sharpening blade ပါရှိခြင်း
ကြိုးမဲ့မို့လို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ သုံးလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလေးပါ။ သုံးရတာလဲလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေတယ်။ အချိန်ကုန်လဲသက်သာစေလို့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ Read more Hide
The philips PQ206-01 electric shaver combines the close cut shaving system with independently floating heads. You can be confident you will look your best every day.
Specifications of PQ206-01 Shaver